Jeux Corporatifs d’Antananarivo andiany faha-30 Nahatratra 24 ireo orinasa nandray anjara
Notanterahina tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina tamin’ny sabotsy sy alahady faran’ny herinandro teo ny andiany faha-30 amin’ny “Jeux Corporatifs”
nokarakarain’ny « Clément Rabary Organisation » niaraka tamin’ny fiaraha-miasa mavitrika tamin’ny Mjs sy ny Cnaps ary ny Midi Madagasikara sy ny Cua. Nahatratra 24 be izao ireo orinasa nandray anjara ka anisan’izany ny mpiasan’ny tambatr’orinasa Vidy Varotra.
VOKATR’IREO FAMARANANA REHETRA NATAO :
Foot à 7 : Adema – Trésor (3) 2 – 2 (2)
Volley-ball : Auximad - Dgt (28-27)
Basket-ball : Filatex - CNaPS (44-33)
Tennis : + 45 kg-Nary ( NSC )nandresy an’i Jean Jacques (Trésor) ; -45kg-Nary (Nsc) nandresy an-dRandriamanampy (Tresor) ; vehivavy-Ambinintsoa (Trésor) nandresy an’i Voahanginirina
Belote : David/Heritiana (Sipem) - Nary/Jean Claude (Nsc) 177-33
Pétanque : Vehivavy-Harindranto/Zodia (CNaPS) nandresy an’i Saholy/Beby (Sara et Cie) ; Lehilahy-Lalaina/Rija/Tohitra – Mampionona/Haja/Gervais (Nsc) 13-12